Fomba 7 ahafahan'ny DAM mety hanatsara ny fahombiazan'ny marikao | Martech Zone
Raha mikasika ny fitehirizana sy fandaminana votoaty dia misy vahaolana maromaro any—eritrereto ny rafitra fitantanana votoaty (CMS) na serivisy fampiantranoana rakitra (toy ny Dropbox). Digital Asset Management (Dam) dia miara-miasa amin'ireo karazana vahaolana ireo—saingy maka fomba fiasa hafa amin'ny atiny.
Safidy toa ny Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, sns.. fanjakana farany fananana; tsy manohana ny dingana ambony rehetra amin'ny famoronana, famerenana ary fitantanana ireo fananana ireo izy ireo.
Amin'ny resaka DAM vs CMS – rafitra misaraka izy ireo izay manao asa tena samy hafa manerana ireo fikambanana ara-barotra. Raha manampy anao hitantana votoaty ho an'ny tranokalanao sy fananana nomerika hafa toy ny bilaogy, pejy fipetrahana, ary microsites ny CMS, ny DAM kosa dia tsara indrindra hitantana ny famoronana votoaty, ny fitantanana ary ny fandefasana amin'ny vanim-potoanan'ny votoaty manontolo sy manerana ny rehetra. fantsona. Ny DAM koa dia manohana karazana fananana maro, anisan'izany ny horonan-tsary, 3D, audio, ary karazana atiny vao misondrotra, miasa ho loharano matanjaka sy tokana amin'ny fahamarinana amin'ny atiny rehetra amin'ny marikanao mandritra ny dian'ny mpanjifa.
1. Ahoana no ahafahanao mampiasa DAM mba handraisana ny paikadin'ny votoaty modular
Miaraka amin'ny DAM ho fitehirizana ivotoeranao, dia mamela anao hifehy tanteraka ny atiny ianao, ao anatin'izany ny fahafaha-mampifangaro sy mifanandrify amin'ny fananana votoaty manerana ny marika, ny tsena, ny faritra, ny fantsona ary ny maro hafa. Ny fanaparitahana votoaty ho votoaty modular kely kokoa sy azo ampiasaina indray - ho votoaty blocs, sets ary traikefa - dia manome ny ekipa ny fahaiza-manao sy ny fahafaha-manao hampiasa tsara kokoa sy mavitrika kokoa amin'ny votoaty ankatoavina mba handefasana votoaty mahaliana, manan-danja ary manokana haingana amin'ny fantsona rehetra mpanjifany. ao anaty.
Mandritra ny fampiasana a paikady votoaty modular dia tsy azo ihodivirana hampitombo ny isan'ny zavatra votoaty ao anatin'ny DAM, misy fomba fiasa fanatsarana metadata, toy ny fandovana metadata, izay afaka manampy amin'ny fanatsorana sy ny automatique ny lafiny sasany amin'ny fitantanana votoaty modular.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny DAM dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny paikady votoaty modular amin'ny fanohanana votoaty mifandraika amin'ny fitantanana ny risika sy ny fanarahan-dalàna, toy ny fandavana, fampahafantarana, marika, sns. Ny DAM dia afaka mitantana votoaty hanohanana ny fitsipika momba ny fampiasana, ohatra, ny fomba tokony hampiasaina na atambatra ho an'ny mpihaino, fantsona, na faritra sasany ny atiny.
Farany, ny tombony lehibe amin'ny fananana votoaty modular rehetra ao anatin'ny DAM dia ny ahafahanao mahafantatra ny fomba sy ny toerana ampiasaina sy ampiasaina indray ny votoaty, manome anao fomba fijery azo atao momba ny fampisehoana votoaty, inona no votoaty niasa tsara indrindra ho an'ny hetsika iray, raha toa ka mila ovaina na misotro ronono ny atiny, sy ny maro hafa.
2. Ahoana no ahafahan'ny DAM fampandehanana manokana ny votoaty tsara kokoa
Amin'izao vanim-potoana nomerika izao, ny votoaty dia ny resaka ataon'ny marika amin'ny mpanjifany. Isika mpanjifa dia misafidy marika iray mifototra amin'ny traikefantsika amin'io marika io: hatraiza ny fahafantarany antsika, ny fahatsapany antsika, ny tsy fitovian'izany rehefa mifandray amin'izany, ary ny maha-mety azy sy mifanaraka amin'ny fiainantsika.
Saingy tsy mora ny fanaterana ireo traikefan'ny mpanjifa manokana amin'ny fifaneraserana rehetra ary mety haka loharano sy fotoana sarobidy. Eo no idiran'ny rafitra fototra toa an'i Aprimo.
Ny fanaovana manokana mahomby dia manomboka amin'ny famokarana famoronana mahomby sy paikady momba ny votoaty hanohanana ny personalization amin'ny ambaratonga. Aprimo dia tsy vitan'ny hoe fototry ny asanao manontolo amin'ny atiny, mitantana sy mandamina ireo singa tsirairay mandrafitra ny traikefan'ny atiny tsirairay, fa manome alalana koa ny paikady toy ny votoaty modular, izay ahafahan'ny ekipa mpamorona sy votoaty afaka mamorona, mahita, miara-miasa haingana sy mora. , mizara ary mampiasa indray ny atiny mba handanjana ny traikefan'ny mpanjifa sy ny fanasokajiana azy ary hitondra fahombiazana bebe kokoa.
Ny endri-javatra Fanamafisana ny atiny marani-tsaina an'i Aprimo dia ahafahanao mandefa automatique metadata-nampanankarena amin'ny milina fanasokajiana izay afaka mifanandrify amin'ny votoaty amin'ny persona marina sy kendrena. Amin'ny alàlan'ny mpampitohy Salesforce sy Aprimo, dia mahazo hery ianao hifanerasera amin'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fantsona, hanao manokana amin'ny faharanitan-tsaina, ary hanana votoaty ary ny mpanjifanao no mitondra ny fizotran'ny varotra votoaty. Ary endri-javatra toy ny famantarana ao anatin'ny maodely marika dia afaka mameno ho azy ny fampahalalana manokana momba ny mpanjifa, toy ny fampahalalana momba ny fifandraisana, mba hanamafisana bebe kokoa sy hamoronana traikefa mpanjifa tsara kokoa.
3. Ahoana no ahafahanao mampiasa DAM mba hiantohana ny fanarahana ny rivotra
Mamorona orinasa betsaka ny votoaty sy ny fitantanana ny risika mifandray amin'io atiny io dia dingana sarotra. Raha tsy misy DAM, ny votoaty sy ny fizotran'ny asa dia matetika voasakana amin'ny sampana sy fitaovana samihafa, manampy fahasarotana sy risika tsy ilaina izay mety hiteraka onitra goavana avy amin'ny rafi-pitantanana. Ny fanatsorana ireo tolo-tanana sy ireo teboka mifandray dia afaka mitahiry fotoana sy vola ary mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny tsena.
Mandrakotra ny fototra rehetra, indrindra ho an'ireo ao amin'ny indostria voafehy sy manokana toa azy fiainana siansa na tolotra ara-bola, mila loharanom-pahamarinana tokana ianao mba hanatsarana ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna sy ny fitantanana ny fampahafantarana, ny porofo manamarina, ary ny fitantanana tsara kokoa ny fananana nomerika rehetra. Rehefa dinihina tokoa, ny atiny dia tsy misy afa-tsy amin'ny fomba tsara arahina, mitantana, mandinika ary mitahiry azy.
Amin'ny fampidirana ny herin'i Aprimo sy teknolojia vahaolana fanarahan-dalàna, ny fikambanana dia afaka manolotra dingana feno sy faran'ny farany izay ahafahan'izy ireo manatratra ny traceability amin'ny alalan'ny andalana amin'ny votoaty ilaina mba hamaliana ny fanadihadiana ara-dalàna, hampihenana ny loza ateraky ny onitra lafo, ary hiaro ny lazan'izy ireo - izany rehetra izany dia manome vokatra miavaka. traikefa sy fampihenana ny fotoana ho an'ny tsena.
4. Ny fomba anampian'ny DAM ny tsy fitovian'ny marika manerana ny fiteny sy ny faritra
Tsy ampy ny manatitra votoaty mifanaraka amin'ny marika sy mifanaraka. Mila mahazo antoka ihany koa ny marika fa zaraina amin'ny mpanjifa sahaza ny atiny sahaza - ampahany tena ilaina amin'ny - traikefa marika tsara.
Midika izany fa ny marika dia mila miantoka fa ny fananana mety dia ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fantsona tsirairay, indrindra rehefa manao juggling votoaty amin'ny fiteny sy faritra samihafa. Eto no misy vahaolana toy ny torolalana marika, vavahadin-tserasera marika, ary modely marika. Ireo endri-javatra ireo dia ahafahan'ny ekipa rehetra, na anatiny na ivelany (mieritreritra sampan-draharaha na mpiara-miombon'antoka), maka mora sy haingana ireo torolalana fandefasana hafatra, logos, endri-tsoratra, fananana, ary maro hafa miaraka amin'ny rohy mivantana ao amin'ny DAM-nao mba hampiasaina manerana ny faritra. fantsona, faritra ary fiteny. Midika izany fa ny fananan'i Etazonia dia azo ovaina mora sy haingana ary alefa any amin'ny tsenan'ny UK nefa tsy mila fanohanana famoronana fanampiny.
Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe vao avy nahavita fanentanana iray tany Etazonia ianao izay nahomby tokoa, ary maro ireo mpivarotra isam-paritra no te-hanao fanentanana mitovy amin'izany. Amin'ny fampiasana ny DAM-nao, azonao atao ny manao ny singa rehetra amin'io fanentanana io ho azon'ireo ekipa ireo amin'ny fahafantarana fa ny maodely, ny atiny, ny famolavolana, ny logo, ny sary, ny horonan-tsary, ary ny maro hafa dia ankatoavina, manara-maso ary mifanaraka tanteraka.
5. Ahoana no anampian'ny DAM ny ekipanao mamorona
Tsy vitan'ny hoe afaka manampy amin'ny tsy fitovian'ny marika amin'ny tsena samihafa ny DAM-nao, fa afaka manampy amin'ny fisorohana ny tsy fahampian'ny famoronana ihany koa amin'ny alàlan'ny famerenana ny fotoana ho an'ny ekipanao mamorona sy mamolavola mba hifantoka amin'ireo tetikasa sarobidy kokoa.
Miaraka amin'ny DAM, ny ekipa mpamorona dia afaka mamorona haingana sy mora, mitantana ary manatitra votoaty miaraka amin'ny tranomboky iray manontolo misy ny fananana modular izay ankatoavina, amin'ny marika ary mifanaraka. Azon'izy ireo atao koa ny mamorona môdely marika ho an'ireo mpampiasa tsy mamorona mba hanokafana votoaty hampiasaina amin'ny tsena samihafa. Ny vahaolana toa an'i Aprimo dia afaka mampihatra automatique entin'ny AI ihany koa mba hanamafisana ny fizotran'ny asa famoronana, ny fiaraha-miasa, ny famerenana ary ny fankatoavana mba hahafahan'ireo ekipa ireo hifantoka amin'ny talentany sy ny fotoanany amin'ny famoronana votoaty avo lenta amin'ny ambaratonga fa tsy ho sahirana amin'ny asa mahazatra.
Ny vokatr'izany rehetra izany dia ny fampifanarahana ny sampana sy ny orinasa manerana ny loharanon'ny fahamarinana tokana, ny fotoana fohy kokoa, ary ny fahitana amin'ny fotoana tena izy amin'ny atiny izay atao sy ny miverina amin'ny ezaka (gazela) mba handraisana fanapahan-kevitra matotra kokoa amin'ny fanaterana ireo traikefa nomerika manokana andrasan'ny mpanjifa.
6. Ahoana ny fametrahana ny DAM-nao ho an'ny masoivoho, mpiara-miombon'antoka amin'ny fantsona, mpaninjara ary ireo mpandray anjara hafa amin'ny antoko fahatelo
Araka ny voalaza, raha tokony ho fitehirizana votoaty siled sy workflows amin'ny rindranasa samihafa, Aprimo dia manamora ny fizotran'ny famoronana votoaty manontolo, manomboka amin'ny famoronana sy tsikera ka hatramin'ny fizarana sy lany daty — amin'ny toerana iray daholo. Manamora ny fikojakojana ny atiny ihany koa izy io, ahafahanao mahita, manolo, na mitahiry votoaty mora foana, ary misoroka ny dika mitovy amin'ny fananana mitovy.
Midika izany fa tsy misy Dropbox sy Google Drive intsony—na dia eo aza ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandray anjara fototra ivelan'ny fikambananao. Miaraka amin'ny DAM, azonao atao ny manome ny masoivoho ivelany sy ny mpaninjara fahafahana miditra amin'ny fananana ilainy, ary mizara votoaty vaovao nampidirin'ny masoivoho iray amin'ny hafa mihitsy aza mba hampiasana haingana kokoa ny atiny.
Fampisehoana toy Tambajotra fanaterana votoaty ho an'ny daholobe (CDN) Ny rohy dia midika fa tsy vitan'ny hoe miantoka ianao fa ny kinova farany amin'ny atiny ihany no ampiasaina, fa mahazo tombony koa ianao amin'ny fotoam-pitaterana haingana kokoa sy ny kinova fanavaozana ho azy ny fanananao na aiza na aiza ametrahana azy, toy ny ao amin'ny CMS-nao.
Azonao atao ihany koa ny mitazona ny tsy fitoviana amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fanomezana torolalana marika, môdely ary fananana ankatoavina ho an'ny masoivoho mba hamerenana haingana kokoa ny votoaty, miaraka amin'ny endri-javatra toy ny safidy fampidinana samihafa sy voly mandeha ho azy hampiasaina amin'ny fantsona sosialy samihafa.
7. Ahoana ny fomba ahafahan'ny DAM marina manome ny CMS-Agnostic Content Operations
Tsy ny DAM rehetra no noforonina mitovy. Na dia misy sehatra CMS manolotra DAM aza, dia singa iray amin'ny vahaolana lehibe kokoa izany– mety ho vahaolana azo antoka mihitsy aza avy amin'ny fividianana vao haingana. Ireo DAM sehatra ireo dia miasa toy ny fitehirizana tsotra ho an'ny fananana farany ary tsy manome ny hery, ny fahaiza-manaony ary ny fahafaha-manao ilaina mba hiasa tsara ao anatin'ny tontolo iainana mifangaro izay mivoatra hatrany.
Amin'izao tontolo nomerika be pitsiny izao, tsy azo atao ny manara-penitra tanteraka amin'ny mpivarotra iray ho an'ny fitambaran'ny omnichannel manontolo. Noho izany, rehefa misafidy DAM ianao dia tokony hitady vahaolana izay CMS-agnostic ary afaka manompo ho maotera votoaty manerantany miaraka amin'ny fampidirana amin'ny vahaolana midina maro. Miaraka amin'ny DAM tsara indrindra, azonao atao ny manaporofo amin'ny hoavy ny fikambananao miaraka amin'ny fahaleovantena hampitombo ny orinasanao ho fantsona vaovao, amin'ny alàlan'ny fampidirana azo itarina sy misokatra.
Ny DAM-nao dia tokony ho afaka manome ny filan'ny omnichannel amin'ny CMS rehetra, ny CMS marobe mifanitsy, ary saika ny karazana fantsona rehetra sy ny rafitry ny tontolo iainana. Izy io dia lasa motera votoaty manerantany, tsy miankina amin'izay fanovana ataonao amin'ny CMS-nao eny an-dalana. Raha tokony hiantehitra amin'ny fitaovana famerana izay matetika "mifampiresaka" fotsiny, ny DAM mahaleo tena, miorina amin'ny rafitra votoaty composable, dia manome anao fahafahana miasa mora foana ao anatin'ny tontolo iainana isan-karazany mba hahafahanao manafaingana ny fotoana mankany amin'ny tsena sy ny fiovam-po. , ary fehezo ny fomba fampivoaranao ny marikao.
Fitsapana DAM Aprimo maimaim-poana
Tags: aiaprimofahaizana artifisialyFitantanam-panananatenyBoxmarikafanarahana ny marikamarika termplatescdnCMScms-agnostikafanarahan-dalànafamerenana fanarahan-dalànateknolojia vahaolana fanarahan-dalànamifangarorafitra composablefifandraisana an-taribyhetsika votoatypersonalization votoatyafa-po paikadyfamantarana votoatykarazana atinymamorona atinyekipa mpamoronatohodranon'itohodrano ho an'ny masoivohotohodrano ho an'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fantsonatohodrano ho an'ny mpaninjaradam vs cmsmanolotra atinyfitantanana fananana nomerikafitantanana ny fanambaranaDropboxfitantanana fananana ara-jeografikaGoogle Drivefiainana siansamitantana votoatypaikady votoaty modularmulti-tenypersonalizationmiverina amin'ny ezakasharepointfamantarana